TNLA/PSLF အား ထာဝရမဟာမိတ် အဖြစ် ဆက်လက်သပ်မှတ်သင့်ပါသလား? - Kachinland News
ဆောင်းပါး September 10, 2020September 10, 2020 KLN
Photo credit: PSLF/TNLA Information Dept.
မြောက်များစွာသော ကချင်လူမျိုးများသည် လက်ရှိ မြန်မာ နိုင်ငံ၏ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း (ကချင်များ အခေါ် မုန်မြစ်ဆင်လီ – Mungmyit Sinli) တွင် ရာစုနှစ်မြောက်များစွာ ကတည်းကပင် နေထိုင်လာခဲ့သည်မှာ ယနေ့တိုင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ထိုဒေသသည်၊ ကချင်ပြည်နယ်ပြီးလျှင် ကချင်လူမျိုးများ၏ ဘိုးစဥ်ဘောင်ဆက်နေထိုင်ခဲ့သော ဇာတိချက်ကျွေ မူရင်း ဒေသဖြစ်သည်။ ၁၉၄၆-၄၇ ခုစ်နှစ်များတွင် ဗြိတိသျှ အစိုးရမှ Kachin Sub-State အဖြစ် တရားဝင် သတ်မှတ်ပေးခဲ့သည့် အထောက်အထားများလည်းရှိသည်။ ထိုနည်းတူစွာ၊ မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရမှလည်း ဤဒေသကို ဗြိတိသျှ အစိုးရမှ Kachin Sub-State အဖြစ်သပ်မှတ်ခြင်းကို ၁၉၄၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၆ ရက်နေ့တွင် တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။ ၁၉၆၀ ခုနှစ်တွင် ကချင်လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့အစည်း (KIO) ကို၄င်း၊ ၁၉၆၁ ခုနှစ်တွင် ကချင်လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် (KIA) ကို၄င်း ဤဒေသတွင် စတင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း နေရာအတော်များများတွင် ကချင် နှင့် ပလောင် ခေါ် တအာင်းလူမျိုးများသည် အတူအကွ ယှဥ်တွဲ နေထိုင်လာခဲ့ကြသည်မှာ ယနေ့ထိ တိုင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် KIO သည် ပလောင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ တည်ထောင်ခြင်းကို မျိုးဆက် နှစ်ဆက်တိုင်တိုင် နှစ်ပေါင်းများစွာ ရက်ရက်ရောရော ကူညီခဲ့သည်။ သို့သော်၊ လက်ရှိအချိန်တွင် TNLA/PSLF တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ ကချင်ပြည်သူများအပေါ် ပြုမူဆက်ဆံသည့် အနေအထားသည် ၄င်းတို့ အား ထာဝရမဟာမိတ်အဖြစ် ဆက်လက်သတ်မှတ် သင့်/မသင့်အပေါ် KIO နှင့် ကချင်ပြည်လူထု တစ်ရပ်လုံးအတွက် အလေးအနက် စဥ်းစားရမည့်အချိန်ဖြစ်သည်။
PSLO/PSLA နှင့် TNLA/PSLF
ကချင်လူမျိုးများသည် ပလောင်၊ ရှမ်း၊ ကိုးကန့်၊ ဝ နှင့် ဒေသတွင်းရှိ အခြားသော ဌာနေ လူမျိုးများကို ဆွေမျိုးများ (ကချင်အခေါ် “ဂျင်ခု-Jinghku”) အဖြစ် သတ်မှတ်သည်။ ထို့ကြောင့် KIO ခေါင်းဆောင် များသည် ပလောင်ခေါင်းဆောင်များကို ရဲဘော်ရဲဘက် အဖြစ် သတ်မှတ်ထားကြသည်။ အကျိုးဆက်အဖြစ်၊ ၁၉၇၆ ခုနှစ်တွင် KIO ခေါင်းဆောင်များမှ ခန်သောင်း ဦးဆောင်သည့် ပလောင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ ဖြစ်သည့် PSLO/PSLA နှင့် ယခင် KIO/KIA ဌာနချုပ် ပါဂျောင်တွင် လက်ခံတွေ့ဆုံကာ နိုင်ငံရေး နှင့် စစ်ရေးဆိုင်ရာများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ထိုဆွေးနွေးပွဲတွင် နှစ်ဖက် ခေါင်းဆောင်များမှ အောက်ပါ အချက်များကို သဘောတူခဲ့ကြသည်။
၁) ကျွန်ုပ်တို့ အမြင်၊ ခံယူချက် နှင့် ယုံကြည်ချက်
က) ကချင်လူမျိုးများ နှင့် ပလောင် လူမျိုးများ သည် နယ်မြေချင်း ကပ်လျက် အေးအတူ ပူအမျှ အတူတကွ နေထိုင်လုပ်ကိုင်စားသောက်လာခဲ့ကြသော လူမျိုးများဖြစ်ကြသည်။
ခ) ကချင်လူမျိုးများ နှင့် ပလောင် လူမျိုးများ သည် တိုင်းချစ်၊ ပြည်ချစ် စိတ်ဓါတ် နှင့် မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ် အလွန်ကြီးမား ထက်သန်လှသည့် လူမျိုးများဖြစ်ကြသည်။
ဂ) ကချင်ပြည်လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့ နှင့် ပလောင်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေး အဖွဲ့ တို့သည် နိုင်ငံရေးခံယူချက်ခြင်း တူညီကြသည်သာမက မိမိတို့၏ လူမျိုးအသီးသီးအား ကိုယ်စားပြုသည့် တိုးတက်သော တော်လှန်ရေး အဖွဲ့ အစည်းများဖြစ်ကြသည်။
ဃ) ကချင်ပြည်သည် လွတ်လပ်သော အချုပ်အခြာအာဏာပိုင် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ကြောင်း ပလောင်ပြည်နယ် လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ မှ အသိအမှတ်ပြုသည်။ ထိုနည်းတူ၊ ပလောင်ပြည်နယ်သည်လည်း ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် နှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့် ပြည့်စုံသောပြည်နယ် ဖြစ်ကြောင်း ကချင်ပြည် လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့ မှ အသိအမှတ်ပြုသည်။
၂) ကျွန်ုပ်တို့ အကြားဆက်ဆံရေး
က) ကချင်ပြည်လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့ နှင့် ပလောင်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေး အဖွဲ့ တို့ အကြား ဆက်ဆံရေးတွင် တန်းတူရေးမူ အပေါ် အခြေခံကာ ဆက်ဆံသွားမည်။
ခ) တစ်ဖွဲ့ ၏အကျိုးကို တစ်ဖွဲ့က အားပေးထောက်ခံ သွားမည်သာမက၊ ကချင်ပြည်တွင်းတွင် နေထိုင်လုပ်ကိုင် စားသောက်လျက်ရှိသော ပလောင်လူမျိုးများ၏ တရားသော အကျိုးစီးပွားကိုသော်၄င်း၊ ပလောင်ပြည်နယ်အတွင်းတွင် နေထိုင်လုပ်ကိုင်စားသောက်လျက်ရှိသော ကချင်လူမျိုးများ၏ တရားသော အကျိုးစီးပွားကိုသော်၄င်း ကျောသားရင်သားခွဲခြားခြင်းမပြုပဲ ကာကွယ်စောင့်ရှောက် အုပ်ချုပ်ကွက်ကဲသွားမည်။
ဂ) တစ်ဖွဲ့ နှင့် တစ်ဖွဲ့ ကူညီရိုင်းပင်းသွားမည်။
ဃ) လိုအပ်ပါက ညှိနှိုင်းစစ်ဆင်ရေး၊ ပူးတွဲ စစ်ဆင်ရေး နှင့် ရန်သူသတင်းဖလှယ်ရေးများ ပြုလုပ်သွားမည်သာမက၊ နယ်မြေခိုလှုံခွင့် နှင့် ဖြတ်သန်းသွားလာလှုပ်ရှားခွင့် ကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာ နယ်မြေမှူးများအား အကြောင်းကြားကာ ပြုလုပ်သွားမည်။
င) အခြားအခြားသော တိုးတက်သည့် တော်လှန်ရေး အဖွဲ့ အစည်းများနှင့် ဆက်ဆံရာတွင် တစ်ဖွဲ့ နှင့် တစ်ဖွဲ့ ညှိနှိုင်းလုပ်ဆောင်သွားမည်။
ဒာထက်ပါစာချုပ်ကို KIO ကိုယ်စား KIO ဥက္ကဌ ‌ဟောင်း မရန် ဘရန်ဆိုင်း နှင့် PSLO/PSLA ၏ ကိုယ်စား ခန်သောင်း တို့မှ ၁၉၇၆ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄ ရက်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုး ခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက်၊ KIO မှ PSLO/PSLA အား စစ်သင်တန်း၊ ခဲယမ်း၊ လက်နက် အပြင် ငွေကြေး ထောက်ပံ့မှုများဖြင့် ပလောင်တော်လှန် ရေးတပ်ဖြစ်သည့် PSLA ကို တည်ထောင်နိုင်သည့်တိုင်အောင် ကူညီပေးခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်၊ PSLO/PSLA သည် ၁၉၉၀ ခုနှစ်များအထိ တော်လှန်ရေးကိုဆင်နွဲနိုင်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော်၊ ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် PSLO/PSLA မှ မိမိတို့၏ မူလ နိုင်ငံရေး ရည်မှန်းချက်များကို စွန့်လွှတ်ကာ ဗမာစစ်အစိုးရထံ လက်နက်ပုံအပ်၍ အညံ့ခံခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့်၊ KIA သည် ၄င်းတို့ လှုပ်ရှားသည့်နယ်မြေများတွင် ပလောင်လူမျိုးများ၏ လုံခြုံရေးကို တာဝန်ယူခဲ့သည်မှာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ့တပ်မတော် နှင့် KIA အကြားစတင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော စစ်ပွဲအချိန်ထိဖြစ်သည်။
PSLO/PSLA အလွန်၊ တအာင်း တော်လှန်ရေးအဖွဲ့သစ်ဖြစ်သည့် လက်ရှိ TNLA/PSLF ကို စတင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ရာတွင်လည်း KIO မှ ငွေကြေးအပါအဝင် လိုအပ်သည့် အကူအညီများပံ့ပိုးပေးခဲ့သည်။ ယင်းသို့ ကူညီရခြင်းမှာ၊ ပြိုကွဲသွားပြီဖြစ်သော PSLO/PSLA အဖွဲ့၏ ခေါင်းဆောင်ဟောင်းများမှ KIO ခေါင်းဆောင်များကို အကူအညီပေးရန်တောင်းခံလာခြင်း ကြောင့် ပြန်လည် ကူညီခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အဖွဲ့သစ် ဖြစ်သည့် TNLA/PSLF ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းအပြီး KIO နှင့် TNLA/PSLF တို့မှ အောက် ပါ သဘောတူညီချက်ကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့တွင် လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။
၁) KIO နှင့် TNLA/PSLF သည်ပင်လုံကတိကဝတ် နှင့် ပင်လုံစိတ်ဓါတ်ပေါ် တွင် အခြေခံသည့် (စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံ) ဖြစ်ပေါ် လာနိုင်ရန် လိုလားသည်။
၂) တူညီသော နိုင်ငံရေး ရည်မှန်းချက်ပေါ်တွင် အခြေခံ၍ စစ်ရေးပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုများ လုပ်ဆောင်သွားမည်။
၃) လိုအပ်သောဒေသများတွင် အဓိကအခြေပြုကာ ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မည်။
၄) လိုအပ်သည်များကို အပြန်အလှန် ကူညီဆောင်ရွက်သွားရန် ကတိကဝတ်ပြုသည်။
၅) ကချင်အမျိုးသားများ နှင့် တအာင်း အမျိုးသားများ၏ ထာဝရမဟာမိတ်ဖြစ်မှုအား ဆက်လက်၍ အသိအမှတ်ပြုထိန်းသိမ်းသွားမည်။
KIO မှ TNLA/PSLF ကိုလည်း ယခင် PSLO/PSLA အဖွဲ့ကဲ့သို့ စစ်သင်တန်း၊ လက်နက်၊ ခဲယမ်း နှင့် ငွေကြေး မတည်မှုကို နှစ်ပေါင်းများစွာ ပြန်လည် ကူညီခဲ့သည်။
TNLA/PSLF ၏ ဂုဏ်သိက္ခာ နှင့် အရှက်အကြောက်မဲ့ လုပ်ရပ်များ
၂၀၁၅ ခုနှစ် နောက်ပိုင်း TNLA/PSLF မှ United Wa State Army (UWSA) ထံမှ အထောက်အပံ့ ရရှိပြီးနောက်ပိုင်း၊ KIO အား မသိမသာ မထီမဲ့မြင်စပြုခဲ့သည်။ ယင်းကဲ့သို့သော အပြုအမူများသည် TNLA/PSLF ခေါင်းဆောင်များမှ KIO ၏ ညီရင်းအကိုပမာ ပြုစုပျိုးထောင်ပေးခဲ့မှု နှင့် ကူညီထောက်ပံ့ပေးမှုများကို မေ့ပျောက်ပစ်ခြင်းဖြစ်သည်။ လက်ရှိအချိန်တွင်၊ TNLA/PSLF မှ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းရှိ ကချင်လူထု နှင့် KIO/KIA များအပေါ် စစ်ရေး နှင့် နိုင်ငံရေး မဟာဗျူဟာဖြင့် စနစ်တကျ အကွက်ဆင်တိုက်ခိုက်လာသည်ကို ရုတ်ဆိုးအကျီးသန်စွာ မြင်တွေ့လာရပြီဖြစ်သည်။ ဥပမာ၊ TNLA/PSLF မှ KIO/KIA ၏ တပ်မဟာ ၄, ၆ နှင့် ၁၀ လက်အောက်ရှိ နယ်မြေ များကို ပလောင် နယ်မြေအဖြစ် အရှက်ကင်းမဲ့စွာ သတ်မှတ်လာသည် ကို တွေ့လာရသည်။ ထို့ပြင်၊ TNLA/PSLF မှ KIO/KIA အုပ်ချုပ် လှုပ်ရှားရာ နယ်မြေများ၌ပင် အခွန်အကောက်များ ကောက်ခံလာပြီဖြစ်သည်။ အဆိုးဆုံးမှာ၊ TNLA/PSLF မှ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း (Kachin Sub-State) ရှိ ကချင်လူထုများအား ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း၊ ဆက်ကြေးကောက်ခံခြင်း၊ ဖမ်းဆီးခြင်း၊ တရား ဥပဒေ မဲ့ သတ်ဖြတ်ခြင်း တို့ကို ကျူးလွန်လာခဲ့သည်မှာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှ ယနေ့ထက်တိုင် ဖြစ်သည်။ ဤ ကဲ့သို့ TNLA/PSLF မှ KIO/KIA အပေါ် ပြုမူသည့်လုပ်ရပ်များ နှင့် ကချင်လူထုများအား ကျူးလွန်သည့် ရာဇဝတ်မှုများကို ကချင်လူထု နှင့် KIO/KIA မှလည်း မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး ဖြစ်သည်။
အချုပ်အားဖြင့် ဆိုရလျှင်၊ အထက်ပါ ဖြစ်ရပ်များကို ရှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်း (Kachin Sub-State) ရှိ KIO/KIA နှင့် ကချင်လူထုများမှ KIO ဗဟို ဌာနချုပ်ထံသို့ ၂၀၁၈ ကတည်း က တင်ပြတိုင်ကြားထားပြီး ဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ TNLA/PSLF ၏လုပ်ရပ်များသည် ရပ်တန့်မသွားသည့်အပြင် ပိုမိုဆိုးရွားစွာ ဆက်လက် ကျူးလွန်နေခြင်းကြောင့်၊ ရှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်း (Kachin Sub-State) ရှိ KIO/KIA နှင့် ကချင်လူထုများ၏ သီးခံနိုင်မှုသည် အတိုင်းထက်အလွန် ဖြစ်လာခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင်၊ KIO/KIA ဗဟိုကော်မတီမှ KIO/KIA နှင့် TNLA/PSLF အကြားထားရှိသည့် ထာဝရ မဟာမိတ်ဖြစ်တည်မှုကို ထည့်သွင်းစဥ်းစားရမည်ဖြစ်သောကြောင့် အချိန်အနည်းငယ် ဆက်လက် သီးခံပေးကြရန် ပြောဆို တိုက်တွန်းလာသည်။ ထို့ကြောင့်၊ KIO/KIA ဗဟိုမှ TNLA/PSLF ၏လုပ်ရပ်အပေါ် မည်သည့် အရေးယူမှုမျှ မပြုသည်ကို တွေ့နေရသည်။ သို့သော်၊ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း (Kachin Sub-State) ရှိ KIO/KIA နှင့် ကချင်လူထုများမှ၊ TNLA/PSLF အား အရေးယူရန်မှာ KIO/KIA ဗဟို ဌာနချုပ်တွင် တာဝန်ရှိကြောင်း နှင့်၊ KIO/KIA နှင့် TNLA/PSLF အကြားထားရှိသည့် ထာဝရမဟာမိတ် ကတိကဝတ်ကိုလည်း ပြန်လည် သုံးသပ်သင့်ကြောင်း တိုက်တွန်းထားသည်။
Kodawng Uma သည် စာရေးသူ၏ ကလောင်အမည်ဖြစ်ပြီး၊ ၄င်းသည် ရှမ်းမြောက်ပိုင်းတွင်အခြေစိုက်သည့် မြန်မာနိုင်ရှိ ဗမာတိုင်းရင်းသားအပါအဝင် ကျန်တိုင်းရင်းသားများ၏ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး နှင့် လူမှုရေးများကို လေ့လာသုံးသပ်သူ တစ်ဦးဖြစ်သည်။
မိုင်ဘတ်ကျေးရွာတွင် လူထုအလင်းအဖွဲ့ မြေမြုပ်မိုင်းဆိုင်ရာအသိပညာပေး
Home TNLA/PSLF အား ထာဝရမဟာမိတ် အဖြစ် ဆက်လက်သပ်မှတ်သင့်ပါသလား?